Ogaden News Agency (ONA) – Qawmiyadaha Guji & Gedio oo Heshiiyay &Tigreegii oo Mudaharaaday.
Qawmiyadaha Guji & Gedio oo Heshiiyay &Tigreegii oo Mudaharaaday.
Wararka naga soo gaadhaya koonfurta wadanka Gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya waanwaan nabadeed oo baryihii lasoo lasoo dhaafay kasocday deegaanada Guji iyo Gedio.
Sida xogta aan kuhelayno odayaasha dhaqanka ee qoomiyadaha Guji iyo Gedio ayaa todobaadkan kujiray shirar isdaba joog ah oo ay kuxalinayaan khilaafkii dabada dheeraa ee kadhaxeeyay labada qoomiyadood ee ood wadaagta ah.
Dagaalka labada qoomiyadood oo galaaftay nolosha dad badan oo shacab ah ayaa larumaysan yahay in ay dabada kariixayeen saraakiishii Tigreega ahaa ee talada wadanka Gumaysiga Itoobiya xooga kuhaystay.
Odayaasha qoomiyadaha Guji iyo Gedio ayaa sheegay in ay xalwaara kagaadhi doonaan khilaafkii soojiitamay ee saraakiisha Tigreegu ay kadhex huriyeen labada qoomiyadood, waxayna odayaashu sheegeen in ay meel gabogabo ah marayaan.
Dhinaca kale shacabka qoomiyada Tigteega ayaa shalay oo Axad ahayd magaalada Walqa’it kuqabtay dibadbax ay kaga soo horjeedaan xukuumada cusub ee Gumaysiga Itoobiya ee uu horkacayo Abiye Axmed iyo ururka talada Itoobiya lawareegay ee OPDO.
Ciidanka amaanka ee Gumaysiga Itoobiya ayaa lasheegayaa in ay xoog kukala eryeen dadkii Tigreega ahaa ee mudaharaadayay waxaana lasheegayaa in qaar mudaharaada yaasha kamid ah laxidhxidhay.